URU Ọ BARA: Ụdị ịhụnanya Baịbụl kacha kwuo okwu ya abụghị nke gbasara ije nwoke na nwaanyị. Kama, ọ bụ ezigbo ịhụnanya. Onye nwere ụdị ịhụnanya a na-enwe ọmịiko, na-agbaghara ndị ọzọ, dịrị obi umeala, na-eme ihe ziri ezi, nwee obiọma, dịrị nwayọọ, na-enwekwa ndidi. (Maịka 6:8; Ndị Kọlọsi 3:12, 13) Ịhụnanya nzuzu anaghị adịte aka. Ma, ezigbo ịhụnanya na-adịgide adịgide.
E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Brenda. Ọ lụrụ di kemgbe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ iri afọ atọ. O kwuru, sị: “Di na nwunye na-ahụ ibe ha n’anya ma ha lụọ ọhụrụ. Ma, ka oge na-aga, ha na-ahụkwu ibe ha n’anya karịa mgbe ahụ ha lụrụ ọhụrụ.”
E nwere otu nwoke aha ya bụ Sam. Ọ lụrụ nwaanyị kemgbe ihe karịrị afọ iri na abụọ. O kwuru, sị: “Obi na-atọ mụ na nwunye m ụtọ mgbe niile ma anyị hụ otú ihe Baịbụl kwuru si baa uru ma dị mfe omume. Ime ihe Baịbụl kwuru na-eme ka ihe na-aga siriri werere. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-adịrị m mfe ime ihe o kwuru. Dị ka ihe atụ, ọ naghị adịrị m mfe mgbe ọ bụla ezigbo iwe ji m, mgbe m chọrọ ime ihe ga-abara naanị m uru, ma ọ bụ mgbe ike gwụrụ m. Ọ na-abụ ụdị ihe ndị a mee, mụ arịọ Jehova ka o nyere m aka ka m na-eme ihe dị mma. M na-agazi makụọ nwunye m. Tupu mụ amara ihe na-emenụ, ọ na-adị ka o nweghị ihe merenụ.”
“A na-egosi na amamihe ziri ezi site n’ọrụ ya”
Jizọs Kraịst kwuru na “a na-egosi na amamihe ziri ezi site n’ọrụ ya.” (Matiu 11:19) Ihe a Jizọs kwuru gosiri na Baịbụl nwere ike ime ka mmadụ nwee ezigbo amamihe. Ihe ndị e dere na ya ka bara uru taa. Ọ na-abara mmadụ niile uru n’agbanyeghị obodo ha si ma ọ bụ omenala ha. Otú ihe e kwuru na ya si gbasa ụmụ mmadụ gosiri na ọ bụ Jehova Chineke, bụ́ Onye kere ụmụ mmadụ, nyere anyị ya. Uru dị n’ime ihe Baịbụl kwuru gosiri na ihe a niile bụ eziokwu. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji gwa anyị ka anyị ‘detụ Jehova ire ma hụ na ọ dị mma.’ (Abụ Ọma 34:8) Ị̀ ga-eme ihe a o kwuru?
BAỊBỤL EMEELA KA M GBANWEE
E nwere otu nwaanyị bi n’ebe Ndịda Eshia aha ya bụ Linh. Ọ gwara ndị bipụtara akwụkwọ a otú Baịbụl si mee ka ndụ ya gbanwee.
Olee okpukpe ị na-ekpebu?
Ezinụlọ anyị na-ekpe okpukpe Buda, na-emekwa omenala. O nweghị ihe m ma gbasara ezi Chineke.
Ụdị ndụ i biri n’oge ahụ ọ̀ dị gị mma?
Mba. Nsogbu zuru m ahụ́ n’oge ahụ. M na-emefu ego aghara aghara. Enweghị m ezigbo ndị enyi. Anaghịkwa m enyeliri papa m na mama m aka idozi nsogbu ha.
Ma, olee otú ihe si mechaa dị mma?
Ihe gbanwere mgbe mụ na ụmụ agbọghọ ụfọdụ bụ́ Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl. M nwee nsogbu, mụ agakwuru ha ka ha nyere m aka. N’agbanyeghị na m tọrọ ha, ha na-agwa m ihe baara m uru. Ihe ndị ahụ ha na-agwa m bụ ihe Baịbụl kwuru, ọ bụghị ihe hanwa chere.
M jirila anya m hụ na mmadụ ime ihe dị na Baịbụl bara uru. N’ihi ya, obi esiela m ike na Baịbụl si n’aka Chineke nakwa na Baịbụl nwere ike inyere onye ọ bụla chọrọ ime ihe o kwuru aka. Ịga akwụkwọ dị mma. Ma, ọ naghị emere mmadụ ihe a Baịbụl na-eme.
Gịnị mere i ji kwuo otú ahụ?
Papa m na mama m gara mahadum. Ha bụkwa ndị ọnụ na-eru n’okwu n’obodo anyị. Ma, ha amaghị otú ha ga-esi edozi okwu ha. Ha gbara alụkwaghịm. Ha anaghịkwa enwe obi ụtọ. Mgbe m nọ mahadum, a na-agwa anyị na mgbe ụfọdụ, iji ike eme ihe bụ naanị otú a ga-esi mee ka obodo dị mma. Ma, Baịbụl kwuru na ihe ọ sọkwara ụmụ mmadụ mee, o nweghị otú ha ga-esi mee ka ihe dị mma n’ihi na Chineke ekeghị anyị ka anyị na-achị ibe anyị. Ọ bụ ya mere na ọchịchị ụmụ mmadụ anaghị eme ka ihe dị mma. * Ma, ọ bụrụ na anyị na-erubere Chineke isi, ndụ anyị ga-aka mma. Anyị ga-enyekwara ndị ọzọ aka ka ha na-eme ihe dị mma.
Olee otú Baịbụl sirila nyere gị aka?
O nyerela m aka n’ụzọ dị iche iche. Anaghịzi m echegbu onwe m. Enwetala m ezigbo ndị enyi. Anaghịzi m emefu ego aghara aghara. Ego m na-eji aga ebe ụfọdụ m chọrọ na-afọdụzi m n’akpa. Ma nke ka nke bụ na Baịbụl emeela ka m nwee ike ịna-enyere ndị ọzọ aka.
^ para. 21 Gụọ Ekliziastis 8:9; Jeremaya 10:23.